Ramadan: a special month for Muslims in Maine - Amjambo Africa
Ramadan: a special month for Muslims in Maine
Ramadan waa bil cibaado oo muhiim u ah dadka Muslimiinta ah. Sannadkan, Ramadaanku wuxuu ka bilowday dalka Maraykanka habeeynkii 5-tii bisha May wuxuuna dhamaaday June 4-teedii, Dayaxa oo siidhacaya. Waqtiga ramadaanka waa mid is bad badala oo sanadba uu kaduwan yahay sanadkii kale.
Inta lagu jiro bisha Ramadaan, Muslimiintu waxay isku dayaan inay xoojiyaan xidhiidhkooda ay la leeyihiin ilaahay oo u dhaqmaan habka Islaamku uu farayo. In la soomo bisha Ramadaan waa mid ka mid ah shanta tiir ee Islaamka – waana mid kamid ah shanta camal ee ugu waawayn ee cadaynaya in qofku yahay muslim. Islaamku wuxuu xooga saarayaa muhiimada ay leedahay samafalka loosameeyo dadka kale, Muslimiintuna waxay aaminsanyihiin in soonka bisha Ramadaan ay ka caawineyso in ay bartaan inay samafalaan.
Maxamed Cawil, Caawiyaha madaxa Gateway Community Services, oo aan ramadaanka wax ka waydiinay ayaa sheegay in “Ramadaanka muhiimadiisu ay tahay inaad ku mahadnaqdo nimcada aad hasato adigoo is bar bardhigaya dadka aanan haysan wax ay cunaan. Dadka haysta wax ay cunaan maalin walba waa dad aad u nasiib badan” Cawill wuxuu soomayay ilaa iyo markuu jiray 13 sadex iyo toban sano.
Inta lagu jiro bisha Ramadaan, Muslimiin badan ayaa si joogto ah u yimaada masaajidka, isku daya inay Quraanka akhriyaan bilawga ilaa dhamaadka (qaar waxay khatimaan inkabadan hal mar). muslimiintu waxay kordhiyaan deeqda ay bixiyaan, iyo guud ahaan waxay baraan naftooda isxakamaynta. muhiimaduna waa in la xoojiyo xidhiidhka ay la leeyihiin Ilaahay. Sida laga soo xigtay diinta Islaamka, Ramadanku waa bishii Quraanka, Kitaabka muqadaska ah ee Islaamka, waana bishii uu jibriil kusoo dajiyay quraanka nabiyulaahi Muhammed. Sidaa daraadeed, waxay u arkaan inta badan Muslimiintu in ay tahay bil barakaysan iyo bil farxad.
Dadka sooman waxba macunaan lagabilaabo intaanay qoraxdu soo bixin ilaa iyo qoraxda inta ay ka dhacayso bisha Ramadaan intay ka dhamaanayso. waxay aaminsan yihiin in gaajada iyo harraadka ay dareemayaan marka ay sooman yihiin in ay barayso in ay unaxariistaan dadka aan haysan wax ay cunaan. Qeybo gaar ah oo kamid ah dadka ayaa laga cafiyay soonka, sida carruurta aan qaan gaarin, dadka waaweyn ee jirran, iyo waayeelka. Muslimiinta waxay bilaabaan inay wax cunaan marka ay dhacdo qoraxdu iyaga oo kubilaaba cunto yar kahor intaanay tukanin. Kadibna waxay cunaan afur kaasoo ah mid ay lawadaagaan asxaabta iyo qoysaska. Kadibna waxaa lacunaa cashada fiidkii taasoo ah mid badan laguna farxo.
Guddoomiye Mills ayaa u qabatay xaflad afur oo ah kii ugu horeeyay kaasoo ka dhacay Blaine House maalin axad ah, May 19-keedii, taasoo ay ka qayb galeen hoggaamiyayaasha Muslimiinta ee Maine. Munaasabadda ayaa waxaa ammaanay bulshada Muslimiinta ee Maine sababtoo ah waxay muujisay ballanqaadkii guddoomiyaha ee ahaa horumarinta iyo isdhexgalka dadka Maine.
Inza Ouattara, oo ah iskuduwaha Caafimaadka ee Qaxootiga Maine, Xafiiska Adeegyada Qaxootiga ee Maine oo layiraahdo Kaatolik Jaariti ee kuyaala Maine waxayna sidoo kale madax utahay hay’ada la dhoho Côte d’Ivoire Association of Maine ayaa waxay tiri “Waxaan si shakhsi ahaan ah ugu farxay martiqaadkii Blaine House. xafladu waxay ahayd mid aad qadarin u mudan. Waxaan runtii u mahad celinayaa in Mills oo ah gofernarka gobolka Maine ay isku dayayso inay abuurto bulsho loo dhan yahay. Xaflada afurka waxay saamayn balaaran ku yeelatay bulshada muslimiitnta ah ee ku nool Maine. Maine waxay hoy’ utahay kumanaan muslimiin ah, kuwaas oo intooda badani asal ahaan ka yimid Soomaaliya, Suudaan, Jabuuti, Suuriya, Afgaanistaan, Iran, iyo Ciraaq. Hay’ado kaladuwan ayaa sidoo kale abaabulay xaflad Afur. Tusaale ahaan, Adeegyada Bulshada ee Gateway waxay martigeliyeen xaflad Afur oo loogu talagalay dadka Muslimiinta ah iyo kuwa aan Muslimka ahayn. Xafladaas oo dhacday 1-dii bishii Jun. Abdullahi Ali ayaa sheegay in xaflada loogu talagalay in lagu wadaago “Cunto, iimaan, iyo dhaqan” Ilaa iyo 175 qof ayaa u dabaaldagay munaasabada ciida oo ay soo abaabuleen New Mainers Project taasoo kadhacday Augusta taariikhdu markay ahayd Jun 7. Xafladaas oo lawadaagay cunto saaxiibtinimo iyo waqti qoysasku kulmaan. Qayta Portland Waxaa sidoo sidoo kale lagu dhigay munaasabad ciideed Dugsiga Hoose ee Riverton taariikhdu markay ahayd Jun 8. Ururka New American Carab (NEAAO) ayaa isaguna qabtay xaflad dabbaaldeg kaasoo dhacay 9-kii Jun kaas oo lagusoo bandhigay Muusik, cunto wadamo badan lagacuno iyo waxyaalo kale oo xiiso leh oo loogu talagalay carruurta
Bulshada Muslimiinta ah ee kunool Maine waa mid weyn. Bulshada kunool Lewiston salaadii ciida waxay buuxiyeen goobta uu leeyahay Bangiga Androscoggin Bank, kaasoo qaada 4,000 oo qof. Ouattara aya dhahday “inaan joogo Maine aniga oo Muslim ah waxay lamid tahay aniga oo muslim nimadayda kujooga meel walba. Islaamku wuxuu isku xiraa dhammaan Muslimiinta, isaga oon la eegayn dalka ay ka yimaadeen. Islaamku sidoo kale wuxuu baraa in meel kasta oo aad ku nooshahay inaad tixgaliso sharciyada uyaalla Meesha aad kunooshahay. Ouattara waxay kaloo raacisay in iyada oo ah qof Muslim ah hadana inay u hogaansan tahay sharciyada u yaalla Maine.
Samar Ahmed, Suzan Ali, Maryan Bashir, Eklas Ahmed Photo by John Ochira
Adam and Diana Lee celebrate Eid with New England Arab American Organization. Photo by Hamid Karimian @OpenVisionstudios
Iftar dinner at Blaine House with Governor Janet Mills
Fun at the Capital Area New Mainers Project’s Eid celebration in Augusta
Iftar dinner at East End Community School hosted by Samar Ahmed and Suzan Ali of Sudanese Roots Photo by John Ochira
Hanna Tallan, Ekhlas Ahmed, and Samar Ahmed. Photo by John Ochira
Zoe Sahloul, President and Founder of New England Arab American Organization and Jenn McAdoo, board member. Photo by Hamid Karimian @OpenVisionstudios
Mohamed Khalid and Yusuf Muse Yusuf at Iftar dinner at Gateway Community Service
Kids have fun at Eid celebration at Riverton School – Hosted by Sudanese Roots and Somali Mainer’s Youth Network.
PreviousDhaqan kala Duwanaanshaha: Nafaqada
NextNow Wajiga labaad ee loogu talagalay dadka magangalyo doonka ah: Guriga Soodhawaynta
Ma waxaad raadineysaa deeq waxbarasho? U diyaargarow hadda si aad u noqotid tartame sare
Africa iyo COVID-19 talaalada
Maine Credit Union Faa’iidooyinka Cashuur xareynta Hore
CPort Isu abaabulka iyo xareynta
Maxay tahay in la ogaado marka la xareynayo